साउदीमा कोरोना निको हुनेको संख्या एक लाख बीस हजार नाघ्यो -
आजै २ हजार ५८९ जना कोरोना मुक्त
१२ असार २०७७, शुक्रबार २३:३४ । साउदी अरेबिया
साउदी अरेबियामा शुक्रबारसम्म एक लाख २० हजार ४७१ जना कोरोना संक्रमितको उपचारपछि निको भएका छन् । उक्त संख्यामा निको भएको यहाँ शुक्रबार दैनिक पत्रकार सम्मेलन गरी साउदी स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. मोहम्मद अल अब्दुलीले जानकारी दिएको हो ।
आज यहाँ कोरोना उपचार रहेको २ हजार ५८९ जना निको भएका छन् । शुक्रबारको अपडेटअनुसार कोरोना उपचारपछि निको हुनेको संख्याभन्दा नयाँ संक्रमित हुने १ हजार ३४९ जना बढी छन् ।
त्यसैगरी आज साउदीमा ३ हजार ९३८ जना कोरोना नयाँ संक्रमित थपिएको प्रवक्ता डा. अब्दुलीले बताए । उनका अनुसार साउदीभर कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमित हुनेको संख्या एक लाख ७४ हजार ५७७ पुगेका छन् । साउदीका विभिन्न अस्पतालहरुमा ५२ हजार ६३२ जना कोरोना बिरामीको बिशेष उपचार भइरहेको डा. अब्दुलीले जानकारी दिए ।
यहाँ कोरोना भाइरसको उपचार गरिरहेका ४६ जनाले आज पनि ज्यान गुमाएका छन् । साउदीभर कुल मृत्यु हुनेको संख्या १ हजार ४७४ पुगेको डा. अब्दुलीले जानकारी दिए । उनका अनुसार विभिन्न अस्पतालमा कोरोनाको उपचार गरिरहेकामध्ये २ हजार २७३ जना गम्भीर अवस्था रहेका छन् ।
यहाँ कोरोनाको संकेत देखिएमा स्वास्थ मन्त्रालयको टोल फ्री नम्बर ९३७मा फोन गर्नसक्ने प्रवक्ता डा. अब्दुलालीले बताए । ‘ We are all responsible ’ भन्ने नारालाई आत्मसात गरी कोभीड-१९ रोकथामका लागि सरकारले गरेका प्रयासलाई सबैले सहयोग गर्न प्रवक्ता डा. अब्दुलालीले आग्रह गरे ।
साउदीमा हालसम्म १ हजार ३६४ जना नेपाली कोरोना संक्रमित भएको नेपाली दूतावासले जानकारी दिए । दूतावासका अनुसार कोरोना संक्रमित उपचारपछि निको संख्या उत्साह जनक रहेका छन् । त्यस्तै कोरोना उपचारका क्रममा एक दर्जनभन्दा धेरै जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
•साउदीमा कोरोना निको हुनेको संख्या ६४ हजार, सार्वजनिक यातायात सुचारु
•साउदी सरकारले अवैधानिक नेपालीलाई एक्जिट दिन सुरु(सूचीसहित)
•साउदीमा चौबीस घन्टायता कोरोना निको हुनेको संख्या ५१ सय थपियो
कोरोना अपडेटः विश्वभर ६० लाख कोरोनामुक्त
साउदीमा आइतबार २ हजार कोरोना संक्रमित उपचारपछि घर फर्के
बाल्टिमोरमा प्रदर्शनकारीद्वारा कोलम्बसको स्मारक तोडफोड
अस्ट्रेलियामा अर्थमन्त्रीद्वारा राजनीतिबाट अलग हुने घोषणा
कोरोना भाइरसबारे अनुसन्धान गर्न डब्लूएचओका प्रतिनिधि चीन जाने
अमेरिकासँग सीमा कडा गर्न मेक्सिको माग